Maxaa looga hadlay kulankii u dhexeeyay Guddiga KMG ee diyaarinta sharciga doorashooyinka Qaranka iyo axzaabta siyaasadda? – Kalfadhi
Guddiga ku-meelgaarka ah ee diyaarinta sharciga doorashooyinka Qaranka ee Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay oo Sabti aheyd kulan la qaatay qaar kamid ah axsaabta siyaasadda ee ka jira dalka.
Kulanka uu guddiga la yeeshay xisbiyada siyaasadda waxaa shir guddoominaayay guddomiyaha guddiga KMG ah ee Diyaarinta sharciga doorashooyinka Qaranka ee Golaha Shacabka Xildhibaan Cabdullaahi Abuukar Xaaji.
Kulanka ayaa ujeedkiisa ugu weyn waxaa uu ahaa in guddiga uu dhageyso, waxyaabaha axsaabta siyaasadda ay ka qabaan diyaarinta sharciga doorashooyinka. Waxaana qaar kamid ah madaxdii ka socotay axsaabta siyaasadda ay sheegay in muhiimad ballaaran ay u arkaan in laga tallagelliyo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ee haatan horyaalo Golaha shacabka.
“Madaxda axsaabta siyaasadda iyo wakiilladii ay soo dirsadeen ee ka qeyb gallay kulanka ayaa waxaa ka muuqday biseyl ah in sharciga si wanaagsan looga wada shaqeeyo islamarkaana dalka ay ka dhacdo doorasho hufan oo xalaal ah oo ku saleysan dastuurka iyo sharciga doorashooyinka iyo shuruucda kale ee wadanka,” ayuu yiri Guddoomiyaha guddiga KMG ah ee diyaarinta sharciga doorashooyinka Qaranka ee Golaha Shacabka Xildhibaan Cabdullaahi Abuukar Xaaji.
Muxuu muhiim u yahay kulanka guddiga iyo axsaabta siyaasadda ee ka jira dalka?
In laga talla-gellinta axsaabta siyaasadda diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ee haatan horyaalo Golaha shacabka, ayaa waxaa loo arkaa hab-dhaqan cusub oo horseedi kara dhaqaajinta geeddi-socodka diyaarinta sharciga doorashooyinka.
Qaar kamid ah xildhibaanada, ayaa sheegay in sharciga oo aan si daah-furnaan ah loo tusin axsaabta ay quseyso in uu horseedi karo muran badan oo tilaam aan wanaagsaneyn ka bixin kara wajiga doorashadda ka dhici doonta dalka Soomaalia 2020/2021.
Guddiga KMG ah ee diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ee Golaha Shacabka ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa ay kulamo la yeelanaayay qeebaha kala duwan ee bulshada si ay uga dhageeystaan aragtiyadooda ku aadan sharciga doorashooyinka Qaranka.
Golaha Shacabka oo mooshin kaga jawaabaya mooshinka badda ee baarlamaanka Kenya